अधिकांश फाइनान्स कम्पनीको रिजर्भ कोषमा सुधार, कुनले कति कमाए ?
काठमाडौं : नेप्सेमा सूचीकृत २० फाइनान्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश कम्पनीको रिजर्भ कोषमा वृद्धि भएको छ । तर, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने २० मध्ये ११ वटा कम्पनीको मात्र खुद नाफामा सुधार भएको छ ।
१० को चुक्ता पुँजी बढ्यो, १० को यथावत
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने २० फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये १० को चुक्ता पुँजी बढेको छ । बाँकी १० कम्पनीको चुक्ता पुँजी अघिल्लो वर्षकै यथावत रहेको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढाउनेमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स रहेको छ ।
प्रोग्रेसिभको पुँजी १८७.२९% ले बढेर ७९ करोड ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी युनाइटेड फाइनान्सको रहेको छ । फाइनान्सको पुँजी २६.२३% ले बढेर १ अर्ब १ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुन कम्पनीको कति चुक्ता पुँजी ?
१५ कम्पनीको जगेडा कोष बढ्यो, सबैभन्दा धेरै बढाउनेमा बेष्ट फाइनान्स
असार मासान्तसम्म आइपुग्दा १५ फाइनान्स कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढाउनेमा बेष्ट फाइनान्स रहेको छ । यसको जगेडा कोष २५५.९५% ले बढेर १९ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअवधिमा दुई फाइनान्स कम्पनीको जगेडा कोष भने घटेको छ । जगेडा कोष घट्नेमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स रहेका छन् । यता, ३ कम्पनीको रिजर्भ कोष भने ऋणात्मक रहेको छ ।
कुन कम्पनीको जगेडा कोषमा कति रकम ?
११ फाइनान्स कम्पनीको नाफा बढ्यो, सबैभन्दा धेरै बढाउनेमा गोर्खाज फाइनान्स
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुदा ११ फाइनान्स कम्पनीहरुले नाफा बढाएका छन् । यसअवधिमा गोखार्ज फाइनान्सको नाफा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । यसको नाफा ५३२.३५% ले बढेर ७ करोड १० लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा र्सिजना फाइनान्सले कमाएको छ ।
र्सिजनाको नाफा १८.४६% ले बढेर १५ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ८ फाइनान्स कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । यता, चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ललितपुर फाइनान्स भने नोक्सानमा रहेको छ ।
कुन कम्पनीले कति नाफा कमाए ?
९ फाइनान्स कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो, सबैभन्दा धेरै र्सिजना फाइनान्सको
आर्थिक वर्ष सकिँदा ९ फाइनान्स कम्पनीले प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी गुडविल फाइनान्सले बढाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ७१ पैसाले बढेर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा पुगेको छ ।
यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी र्सिजना फाइनान्सको ३४ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । ललितपुर फाइनानसको प्रतिसेयर आम्दानी भने ५ रुपैयाँ ६९ पैसा नोक्सानमा रहेको छ ।
कुन् फाइनान्स कम्पनीको कति प्रतिसेयर आम्दानी ?
थप १३ सय १३ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या ७० हजार नाघ्यो
कोरोनाका कारण रोकिएको त्रिविका परीक्षा मंसिर तेस्रो साताबाट सञ्चालन हुने
कोरोना भाइरस खोप सन् २०२१ को सुरुमा आउने चिनियाँ कम्पनीको दाबी
साउदी अरबद्धारा भारतसहित ३ देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध
कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छु : ऊर्जामन्त्री